नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीलाई पत्रः साना साना कदमले दिन्छ ठूलो सन्देश
प्रधानमन्त्रीलाई पत्रः साना साना कदमले दिन्छ ठूलो सन्देश
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । म एक नेपाली नागरिकको हैसियतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो पत्र तपार्ईंका लागि लखेको छु । यो पत्र तपाईंले पढ्नु त हुन्न होला । रातभर युट्युब र सामाजिक सञ्जाल तिर बरालिँदा कतै फ्याट्ट देखिहाल्नु भयो भने पढे पनि फरक पर्दैन ।
केही सुझाव र तपाईंलाई सुनाउन मन लागेका कुराहरु निम्नानुसार छन्ः
–मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक सूर्यराज कँडेल आफैं जार, बोतलको पानी बेच्ने उद्योगका सञ्चालक भन्ने कुरा बाहिर आएपछि ती कँडेललाई त्यो पदबाट मुक्त गर्नुहोस् । किनभने आफ्नो उद्योग समाप्त हुने गरी उनले मेलम्ची ल्याउँदैनन् ।
– नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन नसक्ने, पाइलट राख्न नसक्ने, समयमा जहाज उडाउने वातावरण बनाउन नसक्ने अध्यक्ष मदन खरेललाई त्यो पदबाट मुक्त गर्नुहोस् । किनभने उनमा व्यवस्थापकीय सक्षमता देखिएन । काबिल व्यवस्थापक राख्नुहोस् ।
– ४४ प्रतिशत भागमा वन जंगल छ । पहाडबाट सोत्तर लागेर मानिसहरु तराई बसाई सरेका छन् । पहाडी क्षेत्र जंगलमा परिणत भइरहेको छ । यो बेला जंगलको वैज्ञानिक उपयोग गरी काष्ठ सम्बन्धी उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्ने बेलामा होलसेलमा वृक्षारोपण अभियान चलाउने र प्रधानमन्त्रीलाई राजा महाराजालाई झै बेग्लै आसनमा बसाएर आलोचनाको सिकार बनाउने वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पदमुक्त गर्नुहोस् ।
–एमबिबिएसको छात्रवृत्ति परीक्षामा प्रश्नपत्र बेच्ने प्रकरणमा मुछिएका रमेश सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव बनाइयो । प्रचण्डका भतिजा भएको कारण एक जनालाई राजदूत, साली पर्नेलाई पनि राजदूत बनाउँदा क्षमताभन्दा पनि नाता र निकटताले प्रश्रय पाएको जस्तो देखियो । यो कुरा सच्याइयोस् ।
–अरुको बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप खेपिरहेका र अंक थपेर प्रमाणपत्र दिएको प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारीको दृष्टिले दोषी ठहर गरि त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियालाई तुरुन्त पदमुक्त गर्नुहोस् ।
– भारतले पत्र लेख्यो भन्दैमा नेपालीले विषादी मिसिएको तरकारी÷फलफूल खान जरुरी छैन । चाँँडो परीक्षण गरी आयात अनुमति दिइयोस् । आयातमा अवरोध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत हुन जान्छ, तर जाँच गर्नु अवैध हुँदैन । ट्रकको लाइन नरहने गरी जाँचेर मात्रै खानयोग्य वस्तु आयात गरियोस् ।
– सदियौंदेखि नेपालमै बसिआएका कैयन नेपाली मुसलमानहरु काबिल छन् । दोहोरो नागरिकता भएका, दोहोरो जन्ममिति र नक्कली प्रमाणपत्र भएकै समिम अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाउन जरुरी थिएन । यो निर्णय सच्याइयोस् ।
– के यो सरकारले पाँच वर्ष शासन चलाउला ? जवाफमा खास कसैले भनेका छन्, ‘चलाउन त चलाउला । तर कार्यकाल सकिने बेलासम्म प्रधानमन्त्री पतकर समान भएर रहनेछन् ।’ नभन्दै विषादी परीक्षण गर्ने कुराबाट पछि हट्न्, गुठी विधेयकबाट पछि हट्नु, आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादास्पद हुनुले प्रधानमन्त्रीलाई पतकर बनाउन खोज्नेहरु त्यहिँ भित्रै छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको समस्या आफन्तवाद हो । केपी ओलीको चाकडी नै कमजोरी जस्तो देखियो । अरुलाई पदमुक्त गर्ने कुरा मात्रै होइन, चाप्लुसहरुबाट आफू पनि मुक्त हुनुहोस् । चाकडीका भरमा नियुक्ति बाँढ्दै हिँड्न छाड्नुहोस् ।
–भारत वा अमेरिकाको विरोध गर्नु राष्ट्रवाद होइन । विदेशी उत्पादन बेच्ने थलो होइन नेपाल । यो देशमा नेपालीले नै उत्पादन गरेका वस्तुले भर्नु चाहिँ राष्ट्रवाद हो । यसकारण कृषिजन्य होस् वा उद्योगजन्य, आन्तरिक उत्पादनमा जोड गर्नुहोस् । विदेश भ्रमण गरेर आजसम्म कुनै कर्मचारीले केही सिकेर यहाँ प्रयोग गरेनन् । बरु पसिना बगाउन इजरायल र कोरिया गएकाहरु फर्केर राम्रा काम गरेका छन् । यसकारण यो वा त्यो बहानामा विदेश जाने र बजेट खर्च गर्ने कर्म आजैबाट बन्द गरिदिनुहोस् । तपाई आफैं पनि मुडअनुसार कहिले कोष्टारिका त कहिले भियतनाम पुग्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद यसरी बरालिएर हिँड्नका लागि होइन ।
– तपाईं बाँकी जीवन सुतेरै बिताउँछु पनि भन्न सक्नु होला । समयलाई आफूखुसी फजुल काममा समय खर्च गर्न पनि सक्नु होला । घण्टौं, हप्तौं, महिनौं बेकारमा खर्च गर्न पनि सक्नु होला । तर तपाईंले चाहेर एक सेकेन्ड समय बढाउन सक्नु हुन्न । समयको धनी कोही हुँदैन । यसकारण औपचारिक कार्यक्रममा सयौं मानिसहरुलाई घण्टौं कुराउने धन्दा बन्द गर्नुहोस् । माधव नेपालसँग तपाईं खुसी त के हुनुहुन्छ होला र ? मनमनै त सत्रू नै ठान्नु पनि हुन्छ होला । समयको ख्याल गर्ने माधव नेपालको जस्तो राम्रो बानी अवलम्वन गरेर बाँकी जीवन राम्रो बनाउनुहोस् । किनभने जीवन घृणाका लागि मात्रै हुँदैन । गनीगनी बदला लिने काम पनि अन्त्य गर्नुहोस् ।
– अमूर्त, अस्पष्ट र अप्रत्यक्ष व्यंग्य वाण नचलाउन आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई आग्रह गर्नुहोस् । सल्लाह दिन सक्नेलाई सल्लाहकार राख्नुहोस् । तपाईं जुँगा चलेको हेरेर बोल्न थाल्ने सल्लाहकार हुँदैनन् । त्यस्तालाई हनुमान भन्ने चलन छ । तर म चाहिँ हनुमान भन्दिनँ । किनभने हनुमान भन्ने शब्द सकारात्मक अर्थ दिने बिम्बका रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ । सीधै भन्नु पर्दा तपाईंका सल्लाहकारहरु ‘अरिंगाल’ जस्ता भए ।
– एक सिर्जनशील, प्रतिभाशाली कलाकार धुर्मुसलाई रंगशालाको काम दिएर विवादमा पारिहाल्नु भयो । अहिले उनले रंगशालाको कामबाट हात झिकेको संकेत दिएका छन् । यो राम्रै भयो । छोरीलाई मेयर, कलाकारलाई निर्माण व्यवसायी, बुहारीलाई मन्त्री यस्ता सबै कुरा सुहाउने कुरा होइनन् । ठीक मान्छेलाई ठीक जिम्मेवारी दिनुहोस् । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका पनि सन्तान छैनन् । तर आफन्त त छन् । तपाईंको पनि स्टाटस उस्तै उस्तै छ । मोदीले आफन्तलाई कसरी आफ्नो कर्मबाट अलग राखेका छन् । विस्तारवादी नै भए पनि केही कुरा त्यताबाट पनि सिक्दा हुन्छ नी । कबिला राज्यको जस्तो आचरण मात्रै हुन्छ र सिक्नका लागि ?
– नेपाली चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बहानामा चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । ६० को चिनी ८० पुर्याइयो । एकै झड्कामा अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार तपाईंको सरकारले गर्यो । उद्योगमन्त्री मातृका यादवको भागमा मात्रै ११ करोड परेको गाईंगुईं चल्यो । अहिलेका मातृका यादव ती रक्तचन्दन पक्राउ गर्दै हिँड्ने मातृका रहेनन् । उनले एलडिओलाई ट्वाइलेटमा थुन्दा पनि जनताले ‘कामचोर कर्मचारी थियो होला’ भन्ने ठानेर एक्सक्युज गरिदिए । तर अहिले तपाईंको कार्यकाल ध्वस्त पार्न मातृका पनि जिम्मेवार छन् । यिनलाई पनि पदमुक्त गर्नुहोस् । रघुवीर, मातृका, शक्ति, चक्रपाणि र गिरिराजमणि यी नामहरुको महत्व धर्मशास्त्रतिर छ, याद रहोस्, तपाईंको क्याविनेटमा छैन ।
–प्रचण्ड, बाबुराम, बादल, वैद्यलगायत तत्कालीन माओवादीका १५ जना जति कमाण्डर (तपाईंको पूर्व भाषामा सरदार)लाई पक्राउ गरेर झ्यालखानामा राखेको भए माओवादी जनयुद्धका नाममा १७ हजारले ज्यान गुमाउनु पर्थेन । नेतालाई पाल्ने, कार्यकर्तालाई गोली ठोक्ने प्रवृत्तिले देश १० वर्ष द्वन्द्व, १३ वर्ष संक्रमणमा गुज्रियो । अब पनि त्यही नीति लिने अनि विप्लवलाई ज्वाईं झै पालेर उनका कार्यकर्ता मार्ने दुष्कर्म नदोहोर्याउनुहोस् । विप्लवका नाममा कहिँ कतै कानुन उल्लंघन गर्ने काम कुनै कार्यकर्ताले गरेका छन् भने दोष कार्यकर्ताको होइन, विप्लवको हो । उनलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुहोस् । जति धेरै नेपाली मार्न सक्यो, उति ठूलो नेता भइन्छ भन्ने ‘प्रचण्ड– उपेन्द्र सिद्धान्त’ लाई मलजल नगर्नूहोस् ।
बाँकी भेटमा । धन्यवाद ।